Madaxweyne-ku-xigeenka Somaliland oo Kormeer ku Tegay Goobaha Laga Wado Mashruuca Biyo-ballaadhinta Hargeysa – Hargeisa Water Agency
Madaxweyne-ku-xigeenka Somaliland oo Kormeer ku Tegay Goobaha Laga Wado Mashruuca Biyo-ballaadhinta Hargeysa
Hawsha Haddii aan loo Dhibaatoon oo aan loo Dhididin Dheefteeda Lama Helo’
Hargeysa (HWA)- Madaxweyne-ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland, ahna Ku-simaha Madaxweynaha Md. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici), ayaa 12/October/2016 ka warbixiyey halka uu marayo mashruuca biyo-ballaadhinta caasimadda Hargeysa.
Sida lagu sheegay warsaaxaafadeed uu ku saxeexan yahay Afhayeenka Madaxtooyada Mr. Xuseen Aadan Cige (Dayr), Madaxweyne-ku-xigeenka iyo wefti uu hoggaaminayo ayaa kormeer ku tegay goobaha laga wado mashruuca biyo-ballaadhinta ee degaannada waqooyiga Caasimadda Hargeysa shalay, isagoo sheegay in mashruucaasi dhammaad ku dhawyahay, waxaannu u bushaareeyey shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa.
Waxaannu warsaxaafadeedku u qornaa sidan;
“Madaxweyne-ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici), ahna ku-simaha Madaxweynaha oo ay wehelinayaan maareeyaha wakaaladda biyaha, maayarka caasimadda Hargeysa, guddoomiyaha Gobolka Maroodi-jeex, xubno ka kooban Golaha Wasiirrada iyo masuuliyiinka ka socday xisbi xaakimka KULMIYE, ayaa kormeeray mashruuca biyo-ballaadhinta caasimadda oo wakhtigan maraya meel muhiim ah, dhawaana la filayo inay shacbiga caasimaddu helaan biyo ku filan.
Ku-simaha Madaxweynaha oo halkaa ka hadlay ayaa yidhi: “Maanta waxa aynu u soo baxnay in aynu ogaano xaaladda biyo-ballaadhinta Hargeysa halka ay marayso, mashruucani runtii waa mashruuc aad iyo aad u ballaadhan oo qiimo leh, waa mashruuc caasimadda Hargeysa oo cidhiidhi badan kaga jirta adeega biyaha wax weyn ka tari doona, waana tallaabadii koowaad ee runtii xukuumadayadu markii ay xilka timid ay bilowday, sidii hawshaa loo fulin lahaa iyo culayska jira ee caasimadda, Ilaahay mahadii waxa lagu guulaystay in markii u horaysay sannadkii labaadba in la helo dhaqaalihii koowaad oo ay ballanqaadeen Midawga Yurub oo dhaqaale aad iyo aad u qiimo badan oo $21 milyan oo doollar ahayd, waxa kale oo kaabtay sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF.”
Waxaannu intaas ku daray; “Annigu waxaan aad ugu faraxsanahay dedaalkii aan u soo galnay hawshan biyo-ballaadhinta Hargeysa inuu maanta halkii u dambeeyey marayo, waana ta aan u soo kaxeeyey inteenan in aynu wada aragno haddii aynu xukuumaddii nahay halka ay wax marayaan, qofkuna waxa uu maqlo iyo wuxuu arko way kala qiimo badan yihiin. Masuul kasta oo xukuumadda ka tirsan, maantana halkan jooga inuu ka turjumo dareenkiisa oo uu ummadda u sheego inay hawshii meel fiican marayso oo ay dhaw dhawdahay runtii.
Aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynayaa Wasaaradda Biyaha, Maareeye Ibraahim Siyaad oo runtii hawl aad iyo aad u culus haya, dhammaan hay’adaha innaga taageera, haddii ay dhaqaalaha tahay iyo haddii ay tahay fulinta, Maareeyaha iyo hawladeenadiisa la shaqeeya oo dhan iyana aad ayaan ugu hambalyeynayaa hawl aad u culus ayey runtii hayaan, hawshana haddii aan loo dhibaatoon oo aan loo dhididin dheefteeda lama helo.
Mashruuca waynu u soo dhabar adaygnay muddo dheer ayuu soconayaa waxa marka la eegayo ee la rabo inuu wax tayo leh uu noqdo degdeg ma yeesho, wixii la dedejiyaa tayo ma yeesho in tayadii iyo ku talogalkii 30 sanno inuu jiri lahaa ayaa lagu xisaabtamayaa.”
“Ummadda reer Hargeysa waxaan leeyahay waxaad ku bushaaraysataan in sannadka cusub ee 2017-ka meelkasta oo beebkii hore uu yaal inay biyo gaadhi doonaan, haddii Ilaahay yidhaah, marka halkaa laga soo istaadho biyaha.”
Waxa kaloo Madaxweyne-ku-xigeenku fariin u diray bulshada ku dhaqan degaannada laga wado mashruuca biyo-ballaadhinta, waxaannu yidhi; “qolada deegaankan waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin, waxanse codsanayaa dhulku wuu innaga fara badan yahay, balse intan dhul mishiin loo xidho maaha ee dhulka waa inaad kordhisaan oo ugu yaraan 50 mitir iyo 50 mitir ama 100 mitir ka dhigtaan, waayo ceelku waa qasnad oo waa wadnihii, haddii dayrkii dabada ku hayo amnigiisu khatar ayuu ku jiraa mustaqbalkana dayr ayaa la samayn doonaa, markaa si aynu u ilaalino ceelka waa in dhul ballaadhan la helaa, biyaha dhulka ku jiraana waa khayraad ummaddu ay wada leedahay, ninna gaar uma laha dadkan meesha Alle wada dhigay faa’iido gar ah ayey helayaan, balse biyaha dhulka ku jira ummadda ayaa wada leh, ninna ma sheegan karo, balse dadkaa kala firfircoono ninna waajibkiisu gudanayaa, ninna talada ayuunbaa seegaysa oo wixii ayuu isku dhejinayaa, waanad mahadsan tihiin dhamaantiinba, sida aad ula shaqayseen hay’adda hawsha wada,” ayuu yidhi Madaxweyne-ku-xigeenku.
Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa, Wasiirul-dawlaha Wasaaradda Khayraadka Biyaha, Maayarka caasimadda iyo Guddoomiyaha Gobolka Hargeysa, kuwaasoo dhammaantood ku dheeraaday faa’iidada biyaha iyo baahida ay shacbigu u qabaan, waxayna tilmaameen in mashruucani yahay gabagabo, dhawaana ay Hargeysa heli doonto biyo ku filan.
Madaxweyne-ku-xigeenka, ahna Ku-simaha Madaxweynaha Somaliland, ayaa ku soo wareegay, kormeerna ku sameeyey xarumaha ay ka socdaan biyo-ballaadhinta iyo xarumaha keydka biyaha ee hore u jiray iyo kuwa hadda farta lagu hayo ee lagu xoojinayo kuwii hore, si caasimaddu u hesho biyo wada gaadha.
Sida lagu sheegay warsaxaafadeedka ka soo baxay Madaxtooyada markii weftiga Madaxweyne-ku-xigeenku soo dhammaystay kormeerka, waxa jidka ku dhacay baabuurka Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed oo ay wehelinayeen Xoghayaha Guud ee xisbiga KULMIYE Md. Xasan Siciid Yuusuf, Mr. Maxamed Axmed Caalim (Tiimbaro) iyo darawalka waday baabuurka, dhaawacyo fudud ayaana gaadhay xubnahaas gaadhigu la dhacay, kuwaasoo lagu daweeyey Cusbitaalka Guud ee Hargeysa.